प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर मस्त निद्रामा हो ? | DNFMEDIA
प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर मस्त निद्रामा हो ?
विश्व अहिले कोरोना महामारीको संकटमा छ । विश्वमा लगभग ५० औं लाखले यस महामारीबाट ज्यान गुमाई सके । चिनबाट फैलिएको यो महामारी विश्वको लगभग सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यही कोरोना भाईरसका कारणले नौ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गइसकेको अवस्था छ । यही स्थिति हुने हो भने आउँदो दशैंसम्म १३ हजारले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यस्तो स्थितिमा आफ्नै देशमा सरकारले रोजगार दिन सकेको छैन । अरु त अरु विदेशिने युवाका लागि कोरोना खोपको प्रमाणपत्र पनि सहज र व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न सकेको छैन । खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दिनहुँ सर्वसाधारणको भीड जो कोहीले पनि देख्न सक्छ ।
हे सरकार ! कमसे कम बाहिर जानेहरुलाई अलिकति राम्रो व्यवस्था मिलाइदिए के हुन्छ ? बाहिर गएकाहरुले नै यो नेपाल चलेको छ होइन र ? त्यो दिमागमा लिए के हुन्छ ? बरु यहाँ नेपालमा बसेका नेपालीहरुले १–२ दिन पछि खोप लगाउँला केही हुन्न ? तर ती विचाराहरु आफ्नो बुढी, नानी र बा र आमा छोडेर यो टन्टलापुर घाममा विहानैदेखि लाइन लागेर बसेका छन् । त्यसको लागि छिटो छिटो भन्दा एकदम सरल तरिकाले कोरोनाको प्रमाण पत्र दिलाए के जान्छ र ? जति छिटो तिनीहरु गए तपाईको सरकारलाई नै फाइदा होइन र रु
केपी ओलीको सरकार आए पनि त्यही, शेरबहादुर देउवाको सरकार आए पनि त्यही भन्न थालिसके भीडमा उपस्थित भएका सर्वसाधारहरु । यस्तो लाग्छ भीड हेर्दा जुलुसजस्तो देखिन्छ, युवाहरू आक्रोशित भएर नारा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । प्रमाणपत्रका लागि कोही तिन दिनदेखि धाइरहेका छन् । धाउँदा–धाउँदा काम नबनेपछि केही युवाहरू रित्तै हात घर फर्किएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि आज २४ दिन भइसकेको छ । उनले अझै पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाले एकातिर पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनबीच आपसी समझदारी नहुँदा अन्यौलता झनै बढ्दै गएको छ ।
आजबाट भेरोसिलको दोश्रो खोप वितरण गरिएको छ । काठमाडौं मित्रपार्क स्थित ७ नं. वडामा दोश्रो डोजको खोप लगाउन आम नागरिक विहान ५ बजेदेखि लाइन लागेर त्यहाँस्थित पशुपति कलेज अगाडि विहान ८ बजेसम्म लाइन चाबहिलस्थित अम्बे बिल्डिङ सम्म पुगेको थियो । विहान ५ बजेदेखि लाइनमा बसेका आम नागरिकको एउटै मात्र गुनासो थियो “यो दश बजे भन्दा ७ बजे खोलेर खोप लगाइ दिए के हुन्छ ?” अझै अर्को एक खोप पीडितले प्रतिप्रश्न गरे “प्रधानमन्त्री भएको २ दिनपछि उहाँ त २–४ डुल्नु भो खोपको लागि के छ भनेर ? यहाँ हजुरले सक्नुहुन्छ भने देखाइदिनुस न?”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले केहीे आशा गरेका थिए । उनले संसद भवनमा मेरो पहिलो प्राथमिकता “खोप खोप खोप” मात्र मेरो लक्ष्य भनेको सबैलाई थाहा भएकै होला । तर जनता यसरी विहानैदेखि केही नखााई कुनै पनि वडा वा पालिकामा लाइन् बस्नु स्वाभाविक हो ?
अर्को एकदम जाय विषय बस्तु यो पनि हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसअघि पनि ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले उनले गर्न चाहे धेरै सम्भव थियो तर गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न हो । देउवाको कार्यकाल पनि पटकपटक विवाद र आन्तरिक द्धन्द्धमा फस्दै आएको छ । उनले कहिले शासन राजालाई बुझाएका छन् भने कहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी काम गर्दै आएका छन् ।
अझै भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । यद्यपि बर्दियाका होनहार, जुझारु र केन्द्रीय सदस्य किशोर सिंह राठौर पनि मन्त्री बन्ने लगभग पक्कै भइसकेको छ । कांग्रेसमा पनि धेरै गुट भएकाले देउवाले सबैलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न खोजेका छन् ।
Previous: सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छुः निधि
Next: कोरोना संक्रमितबाट आज २५ जनाको मृत्‍यु